Balanqaadyadaada oofi | Martech Zone
Khamiista, Noofembar 12, 2009 Arbacada, February 10, 2016 Douglas Karr
Nin aanu saaxiib nahay ayaa maalin dhawayd sheeko ii sheegaya. Waxay dareentay inay gubtay shirkad ay ganacsi la samayn jirtay una baahan tahay inay ka sheegto. Dhawr bilood ka hor, markii xidhiidhku bilaabmay, way fadhiisan jireen oo waxay ku heshiin jireen sida ay u wada shaqeyn doonaan, iyagoo tilmaamaya cidda qabanaysa iyo goorta. Waxyaabaha ayaa u muuqday kuwo aad u wanaagsan markii hore. Laakiin markii ay bilaabatay wajigii malabka, waxay aragtay calaamado muujinaya in dhammaantood aysan ahayn sidii looga hadlay.
Xaqiiqdii, shirkadda kale ma aysan ilaalin ballanqaadyo gaar ah oo ay sameeyeen. Waxay kala hadashay walaacooda iyaga waxayna u balanqaadeen inaysan u oggolaan doonin inay mar kale dhacdo, si ay wadada ugu sii socdaan. Waan hubaa inaad arki karto halka ay tani ku socoto. Dhawaan ayey markale sameeyeen 'markana si weyn. Waxay ku heshiiyeen inay xaalad u wajahaan qaab gaar ah ka dibna mid ka mid ah raggooda oo gebi ahaanba og oo qarxiyay. Way ka fogaatay meheradda.
Maxay tan ku leedahay suuqgeynta? Wax walba.
Wax kasta oo aad sameyso waa suuqgeyn
Kaliya maahan xayeysiintaada iyo qoraaladaada baloogyada iyo websaydhkaaga iyo iibkaaga iibka. Wax walba. Markaad ballanqaadyada si cad ama si maldahan u sameyneyso, waxaad codsaneysaa qof ku aaminta. Haddii aad nasiib leedahay, waxay ku siin doonaan kalsoonidooda. Hadaadan fulinin balanqaadyadaada, waxaad lumin doontaa kalsoonidooda. Way fududahay.
Haddii aad tusinayso in badeecadaadu ay tahay tan ugu dhaqsaha badan, way fiicnaan laheyd inay noqoto tan ugu dhaqsaha badan. Hadaad dhahdo waxaad kajawaabtaa wicitaanada 24 saacadood, waxaad sifiican ugajawaabi laheyd wicitaanada 24 saac. Maya ifs, ands, ama buts. Dadku way is cafin karaan. Waad khaldami kartaa. Waa inaad kasbataa kalsoonidaas yar ee aad lumisay.
Laakiin, si ula kac ah uma khiyaanayn kartid. Lama ogola. Sheeg waxaad sameyn doonto ka dibna samee. Hooyo had iyo jeer waxay dhahdaa,
Hadaad balan qaaddo, ilaali.
Kumaa ogaa inay ka hadlayso ganacsi, sidoo kale '
Google runti ma isku dayeysaa inuu ka dhigo mid ka wanaagsan webka?
Nov 12, 2009 saacadu markay tahay 11:05 PM
"Wax kastoo aad sameyso waa suuqgeyn". Waxaad ku musbaartay jumladan. Xitaa markaad toosto oo aad iska eegto muraayadda, waxaa ku lug leh suuqgeyn: adigu waad iska iibineysaa adiga. Haddii aad u muuqato daal, waxaad dareemi doontaa daal. Hadaad umuuqato tamar, alla wiilyahow, iska ilaali! Waxay noqon doontaa maalin weyn! Mahadsanid Nila. –Paul
Nov 13, 2009 at 12: 36 AM
Qiyaastii 10 sano ka hor mid ka mid ah dadka aan jeclahay ee iibka ayaa ii sheegay tan: Waa inaad u sheegtaa macmiilka runta 1000 jeer ka hor intaanay ku kalsoonayn adiga laakiin haddii aad seegto xitaa hal marna mar dambe kuma aamini doonaan. Hadaad dhahdo samee.
Nov 12, 2009 saacadu markay tahay 10:12 PM
Aad baad u saxantahay! Waxaan u shaqeeyay shirkado qaarkood oo lahaa kooxo iib ah oo si fudud u nuugaya dadka waawayn oo leh ballanqaadyo natiijooyin waaweyn ah - inay ogaayeen inaanay la kulmi karin. Dhibaatadu si fudud ugama ahayn dhibaatada iibka iyo suuqgeynta, xitaa wey ka sii qoto dheeraatay tan iyo markii ay saameyn ku yeelatay taageerada macaamiisha iyo shaqaalaha maamulka koontada. Ma jiraan wax ka sii cabsi badan dejinta rajooyinka ay tahay inaadan ku qanacsaneyn!
Qoraal Cajiib ah! Aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada!
Nov 13, 2009 saacadu markay tahay 1:21 PM
Waxa muhiimka ah ee la xasuusto waa fikradda isbeddelka. Hadaad qalad ku gasho wax hagaaji iskuna day inaad waligaa qaladkaas dib dambe u dhicin.